I-NAB Khombisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE - Ikhasi 960 - 2019 NAB Bonisa Izindaba: Ukusakaza Ubunjiniyela, I-TV neRadio Technology kanye ne-Post Production News. I-NAB Bonisa i-2019.
Hardware nesoftware solution harnesses AI izinjini, isimo se-state-of-the-art
Q: Iyini indima yakho yamanje futhi ifaka ini? A: Ngingunjiniyela womsindo we-freelance and mixer, m ...
I-Digicaster SoloCam (umthombo: Digital Comm Link, Inc.) Kusukela ukufakwa kwayo e-1995, eFlorida-ba ...
NguJason Coari, Umqondisi Wezokumaketha Komkhiqizo, IQuantum Ngomlando wanamuhla, ubuchwepheshe be-technology ...
Amanethiwekhi we-TVU, ubuchwepheshe nomholi wemakethe kuzixazululo zevidiyo ezibukhoma ezisekwe ku-IP, namuhla umemezele i ...
IHERMOSA BEACH, CA Cabanga indawo enhle enelanga futhi emnandi unyaka wonke, lapho umculo bukhoma ...
Njengenkampani ye-Amazon Web Services, i-AWS Elemental MediaLive ihlanganisa ubuchwepheshe bevidiyo obunzulu ...
Sekucishe kube amashumi amathathu eminyaka, i-AJA Video Systems ibilokhu isimanga embonini yamavidiyo abuchwepheshe ngo ...
I-Fincons Group iyinhlangano yokuhola yebhizinisi ye-IT ehamba phambili. Kusukela i-1983, iqembu le-Fincons seligxile ...
INewTek TriCaster® Mini Video Production System Inikezela I-UHD Digital Media Production kanye Nokusakaza
Kusukela i-1985, NewTek, Inc. ibuse njengomholi wezobuchwepheshe bevidiyo ye-IP obesedlulisele ngenkuthalo ...
I-LN Media Inc. yeLBI Media Inc. Isiteshi Somsakazo SeNombolo One Los Angeles
I-LBI Media, Inc., iyinhlangano ehamba phambili ihlanganiswe iqondile, isiteji esiningi, abezindaba bezilimi zaseSpain c ...
I-KCRW Yakha iNew State-of-The-Art Radio Broadcast kanye neNhloko Yezindaba
I-KCRW isanda kusuka endaweni engaphansi kwesakhiwo esisekolishi elikhulu laseSanta Monica College, yaya ...
Ama-Atomos Ukuthola I-Timecode Systems Kusho Ukusebenza Okusebenzayo Kokuningi kwe-Multicamera
Njengenkampani yesoftware nobuchwepheshe behardware yomhlaba, i-Atomos idala, ithuthukise futhi ithengise ngakho ...
INDLELA UHarvard Ayisakaza Ngayo Ngaphezulu Kwemicimbi ye-300 Yezemidlalo Njalo ngonyaka enabasebenzi Ababili Abasebenza Isikhathi Esgcwele
Ibhalwe ngu: Imry Halevi Assistant Director of Athletics, Multimedia and Production, at Harvard Unive ...
UMike Baldassari (umthombo: Jonsar Studios) UMike Baldassari uyindoda eyaziwayo futhi ehlonishwa kakhulu ...
I-ATTO Disk Benchmark ye-MacOS Ifikile
Akunakuphikwa ukuthi i-ATTO Technology ihlala izibonakalisa ukuthi ingumhlinzeki oholayo we-high ...
U-Amy DeLouise (umthombo: UJoseph DiBlasi) I-2019 NAB Khombisa amaphrofayili waseNew York uchungechunge lwezingxoxo ezenziwa ...
Ubuntu namaphrofayela: Kelley Slagle
UKelley Slagle (umthombo: I-Roy Cox Photography) I-2019 NAB Khombisa amaphrofayili weNew York uchungechunge lwezinkinga ...
Ubuntu namaphrofayela: U-Douglas Spotted Ukhozi
UDouglas Spotted Eagle Broadcast Beat “NAB Show New York Profiles” uchungechunge ...
Ubuntu namaphrofayela: Eran Stern
U-Eran Stern esitudiyo sakhe. (Umthombo: UNatasha Newrock-Stern) "NAB Show New Broadcast Beat" NAB Show New ...
Umphathi Wokukhiqiza / Umphathi Wezemigwaqo
Amazwana Off kuMphathi Wokukhiqiza / Umphathi Wezemigwaqo
I-Mills Entertainment ifuna umuntu oshukumisayo ukuze asekele ikhonsathi yethu ebukhoma kanye nemidlalo yaseshashalazini endimeni ye-Production Manager. I-Mills Entertainment ingumholi wezimboni kwezokuzijabulisa ezibukhoma nezingenye indlela. Sisebenzisana nabadwebi abasezingeni eliphakeme nabalingani bokuqukethwe ukukhiqiza nokukhuthaza ukuzibandakanya kumidlalo yaseshashalazini, amakhasino, nasemakholiji kulo lonke elase-United States nakwamanye amazwe. Sikhula ngokushesha futhi sifuna abafakizicelo abahlukile abanentshisekelo embonini yezokuzijabulisa ebukhoma kanye nesifiso sokujoyina iqembu eliwina. Imisebenzi eyinhloko yesikhundla ifaka: - Ucwaningo, ukuzibandakanya, kanye nokubheka abathengisi bokukhiqiza kumvakashi obanzi ...
Amazwana Off Kwimenenja Yokukhiqiza
Umphathi Wokukhiqiza - Isikhungo i-Sheen Center isimo esisha senkampani yobuciko i-Off-Broadway equkethe amathiyetha amabili, ama-studio amane wokuziqhelanisa nendawo yesikhala segalari, evula indawo yedolobha ekuqaleni kwe2014. Umphathi Wokukhiqiza ubheka zonke izici zobuchwepheshe bezikhala zeSheen Center nemisebenzi ehlobene nayo. UMphathi uzosebenza, alondoloze futhi avikele impahla ye-tech yemidlalo yeshashalazi (kufaka phakathi ukukhanyisa, imisindo, nezinto zokubonisa), ukwaba izinsiza zezikhala zeSheen Center ngokuya ngezidingo zabaqashi, ukuhlanganisa izidingo zetheknoloji zabaqashi, ukuxhumanisa ukulayisha umthwalo wokulayisha zemidlalo yaseshashalazini futhi uhlole izikhala zemidlalo yaseshashalazini kukho konke ukuphuma kwemithwalo, ukuhlela nokuqondisa ...
Umdwebi Wokwakha Ophezulu
Amazwana Off kwi-Senior Broadcast Artist Artist
Izingcweti zobuciko eStudio City zakha izinto eziningi zemibukiso ebonwa njalo kuthelevishini yokusakaza emizini engaphezu kwesigidi se-100. Lesi sikhundla esiyingqayizivele. Abaculi basebenza ngokushesha ngaphakathi kwemikhawulo eqinile. Uzosebenza njengomqondisi wakho wezobuciko, i-animator nomdwebi wokukhiqiza. Leli yithuba elihle lokuthi umqambi abe nokulawula kokudala kumaphrojekthi futhi abe yingxenye yayo yonke inqubo yokudala. Umuntu ozongenela ukhetho kufanele abe uchwepheshe ku-Cinema-4D naku-After Effect endaweni yesikhulumi se-Mac OS.
Amazwana Off kwi-Production Designer
Sifuna uMkhiqizi Wokukhiqiza wezinsuku ze-6 zokudubula eNew York City (ukusuka ngoFebhuwari 8th kuya ku-13th). Sizodinga uMkhiqizi Wezobuchwepheshe ukuthi asebenze ngokubambisana nomqondisi ne-DP kubuhle bemafilimu. Siyiqembu elinothando kakhulu, elinethalente futhi elibucayi futhi inhloso yethu ukuthumela le filimu emfushane kwimikhosi! Singabathweswe iziqu e-French Cinema School "ESRA" bedube ifilimu yethu yokugcina. Sinezinto zokusebenza ezifanele (Ikhamera ye-Alexa, njl.) .. Ukukhiqizwa kwangaphambili kuzoqala ekuqaleni kukaJanuwari lapho uMkhiqizi Wokukhiqiza engaqala khona ukwakheka njengohlelo lakhe ...
Umphathi we-Akhawunti Yezemidlalo (Umsakazo waseSpain)
Amazwana Off kwi-Akhawunti Yezeemidlalo Yezemidlalo (Ukusakaza kweSpain)
I-WFAN AM / FM edume ngomsakazo ne-NewYork Yankees, ibheka abaphathi be-Akhawunti YezeMidlalo ukumela futhi badlulise umsakazo weSpanish ngeNew YORK YANKEES Radio Network. Lesi sikhundla sidinga ukusebenza kanzima, ukuziqalela, kanye nokuthengisa okugxile ekuthengisweni komuntu ngamunye. Kufanele uqonde futhi uhloniphane nokuthi angahlanganiswa kanjani. Abafakizicelo kufanele babe nokuhlangenwe nakho okuncane kokunye noma ngaphezulu kokulandelayo: Ukuthengiswa Kwemidlalo Kwezemidlalo, Umsakazo weSportsor, Ukuthuthukiswa Okusha Kwebhizinisi, Ukuthengisa Ngokuphathelene, kanye / noma Amakhono Okuthengisa Okubhaliwe. Isihluthulelo salesi sikhundla sizoba ukuthola futhi nokuhlangana ngobudlelwano ngesinqumo esiyisihluthulelo se-Local and Regional ...
Umdidiyeli weDigital Media Production
Amazwana Off ku-Digital Media Production Coordinator
- Umkhiqizi Wokukhiqiza uzobika kuMenenja weDijithali Production - Ozibophezelayo ngokuxhumanisa izinto zokukhiqiza njengoba zihlobene nemibukiso ye-studio, imibukiso yakude nemicimbi - Sebenzisana namalungu eqembu ukuvikela izitshudeni, kanye nokusiza ekuthwebeni izinto ezivela Ukulungiselela ukugoqa - Sebenza ngqo noMphathi Wokukhiqiza ukuze uhlangabezane nezidingo zesabelomali nokulandela umkhawulo wesabelomali - Sebenzisana nabathengisi ukuvikela amabhidi, ukudala ama-oda wokuthenga, inqubo nokulandela ama-invoice - Sebenza nabakhiqizi bomnyango ukuvuselela, ukuhlela kanye nokufaka idatha kuhlelo lokuhamba - Hambisana kakhulu neminyango elandelayo: Special ...
Umsebenzi wethelevishini, uJr. Unjiniyela
Amazwana Off ku-Television Operations, Jr. Ngunjiniyela
I-Playboy- indawo lapho abasunguli abangakwazi ukusungula khona. Siqasha ithalente eliphakeme futhi sibanikeze indawo abangasungula futhi baphayone kuyo ukuze bathuthukise isipiliyoni samakhasimende. I-Playboy uhlobo olwaziwa kakhulu kwezokuzijabulisa kwabantu abadala emhlabeni. Ngezivumelwano zokuthola amalayisense, i-Playboy ivela emikhiqizweni yabathengi ngokusebenzisa izitolo ezahlukahlukene emazweni angaphezu kwe-150.Sifuna ukusiza amalungu eqembu lethu ukwakha imisebenzi ethokozisayo nezithelo. Ukudalwa kuka-Playboy kusuka ekuphrintweni kuya kwithelevishini kuya ku-inthanethi futhi manje kuselula bekuqhutshwa umoya wethu ukuthi ube ngumholi embonini yethu kanye nesibindi sokuba phambili e ...
Umsizi Ophethe, Production Wokukhiqiza
Amazwana Off Kwabasizi Abaphetheyo, Abakhiqizi Bokuposa
Imisebenzi yezokuphatha ifaka izingcingo ezisindayo, izingcingo ezigoqayo, ukushaya indiva, ifeksi kanye nokufayila. Imisebenzi ifaka phakathi ukuhlela imihlangano, ukuhlela ukuhamba, ukulungiselela imibiko yezindleko, uku-oda okuphindwe ngevidiyo, ukusabalalisa ama-dailies nokusikeka, kanye nokugcina umtapo wevidiyo kuyo yonke imibukiso. Umuntu ngamunye uzoba nesibopho kulokhu okulandelayo: Ukuhambela imihlangano yamasonto onke yePost Production. Ukuvuselela imininingwane yabasebenzi namathalenta kwimibukiso kaMongameli. Ukulandelela izikhathi zokugijima ze-episodic zechungechunge. Ukulandela ama-invoice ahambisana nenqubo yokukhokha yabathengisi kuma-shows, ikakhulukazi ezindaweni zamalayisense omculo. Ukusiza ngezinto zokulethwa nomsebenzi wephepha. Umuntu ozophumelela uzoba umuntu oqala ukuziqalela othatha isinyathelo futhi ...
Umsizi Wokukhiqiza Wokuhlela
Amazwana Off kuMsizi Wokukhiqiza Wokuhlela
Umsizi Wokukhiqiza Wokuhlela we-Access Hollywood unesibopho sokusekela abakhiqizi bemibukiso njengoba kudingeka, kanye nokufaka wonke amagumbi njengoba kuceliwe nguMphathi. Isibopho: Siza abakhiqizi ekutholeni nasekutholeni i-footage kanye nama-soundbites. Ngena ezinye izinto zokwakha njengoba zidingeka abakhiqizi be-show. Ukubhalwa kwe-Verbatim kwamateyipu wensimu ye-Access Hollywood nokuphakelayo okungenayo. Faka isikrini imibukiso yenethiwekhi ehlukahlukene nama-synopses. Eminye imisebenzi njengoba yabelwe nguMphathi.QUALIFICATIONS / REQUIREMENTS Qualifications: Iziqu zeBachelor kusuka ekolishi elivunyiwe noma eyunivesithi. Isipiliyoni seminyaka engu-1 yeminyaka esebenza ne-Microsoft Office (iZwi, i-Excel, i-Outlook, njll.). Izidingo Zokufanelekela: Abamele ukhetho abanentshisekelo kumele balethe ukuqalisa phansi kwe ...
Umsizi Wokukhiqiza / Umgijimi
Amazwana Off ku-Production Assistant / Runner
I-NBCUniversal ingenye yezinkampani ezihola phambili zemidiya nezokuzijabulisa kwezentuthuko, ukukhiqiza, nokumaketha kwezokuzijabulisa, izindaba kanye nokwaziswa kuzithameli zomhlaba. I-NBCUniversal ingeyakho futhi isebenzise iphothifoliyo ebalulekile yezindaba zethelevishini zezindaba nezokuzijabulisa, inkampani ehamba phambili yezithombe ezinyakazayo, imisebenzi ebalulekile yokukhiqiza ithelevishini, iqembu leziteshi zethelevishini eziholayo, namapaki ezaziwayo zomhlaba. Kuyinqubomgomo yamabhizinisi ahlobene ne-NBCUniversal kanye ne-NBCUniversal ukubheka bonke abafakizicelo abafanelekile ukuthola umsebenzi ngaphandle kokubheka ubuhlanga, umbala, inkolo, imvelaphi yezwe, ucansi (kufaka phakathi ukukhulelwa) ukuthambekela kwezocansi, ubudala, ukukhubazeka, isimo se-veteran noma ezinye izici ezivikelwe umthetho. CAREER LEVEL SitholeCOUNTRY ...
Umsizi Wokukhiqiza (Isikhathi Esithile)
Amazwana Off Kumsizi Wokukhiqiza (Isikhathi Esithile)
I-WBFF inokuvulwa okusheshayo koMsizi Wokukhiqizwa Kwengxenye Yesikhathi. Imisebenzi eyisisekelo ifaka ikhamera yesitudiyo ne-teleprompter yezindaba ezisakazwa bukhoma neminye imisebenzi njengoba inikezwe. Lesi sikhundla senqanaba lokungenela sizosithola ekuqeqeshweni komsebenzi, noma kunjalo, eminye imfundo ekukhiqizeni ithelevishini inconywa ngokuqinile. Amathuba amahle kakhulu okuthuthuka. Amahora Okuvamile: 4: 30pm - 11: 30pm (amahora we-24-28 ngesonto). Abafakizicelo abafanele kufanele bakwazi ukusebenza kusihlwa, ubusuku, izimpelasonto namaholide athile.
Amazwana Off ku-Production Intern
Abakwa-Production Intern bazosebenza ngqo neMenenja Yesiteji, Umphathi Wokukhiqiza kanye namalungu eqembu lokudala, bebheka futhi bebamba iqhaza ekwakhiweni komkhiqizo ophelele. Ilungele labo abanentshisekelo kuzo zonke izici zokuklama ukukhiqizwa, ukuphatha kanye nokwenza ngaphakathi kwenkampani yemidlalo yaseshashalazini esebenzisana ngokubambisana. Abaqeqeshiwe banikezwa umthwalo obalulekile futhi badinga ukutholakala ngokusebenza ngokugcwele komkhiqizo. Amandla wokusebenzisa ibhodi elikhanyayo, uhlelo kanye / noma ukugijima komsindo kanye nokusetha upende, ukubaza okuyisisekelo, ikhabethe nokuhlangenwe nakho kokusebenza kukhona okuhlanganisa, kepha akudingekile. Isifiso sokufunda ngazo zonke izici ...
Hlanganisa Umphathi Wokukhiqiza
Amazwana Off ku-Associate Production Manager
Ubuholi obuqinile namakhono okwenza izinqumo ezisheshayo kumele. Ilayisense yokushayela enerekhodi lokushayela elihlanzekile nokwaziwa kwe-Excel, izinhlelo zokusebenza ze-Google, ne-software ye-accounting edingekayo. Zizwa ukushayela amaveni amakhulukazi namaloli. Abamele ukhetho bayoba nesipiliyoni sokuphathwa kokukhiqiza esedlule. Isikhundla siqala ngoMeyi siphele ngo-Okthoba. Iholo liyancintisana, futhi indawo yokusebenza iyakhanga, iyinselelo, futhi inokwethembeka okuphezulu kwezobuciko.
Amazwana Off kwi-Post Production Internship
I-Post Production boutique ifuna abahleli abahleli behhovisi lethu le-Chelsea. Inkampani yethu isebenza kakhulu namakhasimende amafilimu azimele nakwamanye amazwe ukudala ama-trailer aseshashalazini, ama-cliplines asemuva kwesigcawu kanye nama-promos radio. Abafundwayo banethuba lokubona kuqala ukuthi indawo yokukhiqiza isebenza kanjani nsuku zonke futhi isize ekuhleleni amaphrojekthi akhethiwe. Le yi-internship engakhokhelwa yabafundi noma abaphothule muva nje abanentshisekelo yemisebenzi yokuhlela, ihluzo ezinyakazayo nokumakethwa kwamafilimu. Sifuna umuntu ongazibophezela osukwini olulodwa noma ezimbili ngesonto ehhovisi lethu ukuze abe semester ezayo. Ubuchwepheshe nge-Final ...
Amazwana Off kuMsizi Wokukhiqiza
-Ungacwaninga ngendaba, ucwaningo lwedatha yamakhompiyutha kanye nokuhlola amaqiniso okokukhiqiza-Amathephi, izithombe, njll. Futhi wenze futhi uvuselele izingodo ukuze zihambisane nalawo ma-materials -Ukuhlela ukuhlela okuyisisekelo -Sebenzisa imisebe ye-CNN s, i-Archive, kanye nezinhlelo zesoftware -Qondanisa Ukuvunyelwa kwamalungelo ngabameli be-CNN-Ukusetshenziswa komculo kweTrack -Logging b-roll -Regging on camera camera. -Assisting in the media's digital and social extensions -Chordinginging namanye amaqembu ngaphakathi kwe-CNN & Turner (Imisebenzi, PR, njll) -Ukushicilelwa kweThala lencwadi kanye nemithombo yangaphandle yevidiyo / ifilimu -Ihambisa izingcezu eziqediwe -Ihluzo lokuqeda ngokugcizelela okukhulu kwezemidlalo , ezokuxhumana, ukukhiqizwa kwe-TV, ubuntatheli noma izifundo eziningi zemidiya noma umsebenzi ...
Ukukhiqiza / Umsizi WeDeski Yezindaba
Amazwana Off ku- Production / News Desk Assistant
I-Sinclair Broadcast Group ne-Local 12 WKRC-TV inokuvula okusheshayo koMsizi Wokukhiqiza weTelevishini ngokugcwele! Izibopho zizofaka ukusebenza kwemishini yesitudiyo, kufaka phakathi amakhamera, i-teleprompter, nokuqondisa phansi. Kumele futhi ikwazi ukusiza ukuqondisa iqembu lenkambu, ukuphendula ukuxhumana, izindaba zocwaningo, kanye neminye imisebenzi njengoba yabelwe. Sifuna umuntu ozosebenza njengengxenye yedeski lethu labaphathi bezindaba. Izicelo kumele zibe nesipiliyoni sokusebenza kuzo zombili iziteshi zokukhiqiza ithelevishini kanye nenkundla yezindaba yokusakaza.
Ufuna i-PA yochungechunge lwewebhu engokoqobo endaweni eyindida yabantu asebathatha umhlalaphansi eFlorida ... okusontekile kuzoba nelinye iqembu elilandela ukwenza umshayeli ongokoqobo. Sikuhambela eFlorida ukuze uthole ihlathi ekuqaleni kukaJan ngezinsuku ze-6.
UMqondisi WOKUGCINA WE-DIGITAL
Amazwana Off KU-DIGITAL PRODUCTION MANAGER
Inkampani yokukhiqiza eholwa abaqondisi enomsebenzi olula: ukwenza izikebhe zokuphoqa okuhlangenwe nakho okubukelwa ngababukeli bese kwabelana ngakho. Kuhloswe umsebenzi owesabekayo kuzingxenyekazi zonke, i-Psyop igxile ekwakheni okuqukethwe okuholwa ukwakhiwa okucatshangwa nobuciko obumangalisayo. Njengamanje sifunana neMenenja Yokukhishwa Kwedijithali ehhovisi lethu le-LA. Izimfanelo nezinto eziza kuqala yilezi: Kufanele ube nolwazi oluqinile lweSotgun (ukusetha isibhamu, impahla, ukuphatha imisebenzi, njll.) Jwayela nezinhlelo ezisetshenziswa kuphayiphu: MayaHoudiniArnoldNukeZBrush / MudboxMotionBuilderExcellent amakhono okuxhumana njengoba uzobe uhlangana nabadwebi bethu, abaqondisi, nethimba lokukhiqiza ukusabalalisa amanothi futhi alandele nsuku zonke ...
Ikhasinkomba 960 of 976«Okokuqala...930940950«958959960961962»970...Last »
I-Archives ye-Article Khetha Inyanga I-December 2019 (146) November 2019 (447) Okthoba 2019 (432) September 2019 (389) August 2019 (399) Julayi 2019 (286) Juni 2019 (264) Kwangathi i-2019 (273) April 2019 (503) March 2019 (622) I-February 2019 (325) UJanuwari 2019 (280) I-December 2018 (243) November 2018 (406) Okthoba 2018 (496) September 2018 (495) August 2018 (397) Julayi 2018 (876) Juni 2018 (869) Kwangathi i-2018 (871) April 2018 (831) March 2018 (779) I-February 2018 (684) UJanuwari 2018 (605) I-December 2017 (396) November 2017 (712) Okthoba 2017 (835) September 2017 (608) August 2017 (583) Julayi 2017 (710) Juni 2017 (543) Kwangathi i-2017 (621) April 2017 (695) March 2017 (704) I-February 2017 (340) UJanuwari 2017 (364) I-December 2016 (606) November 2016 (344) Okthoba 2016 (556) September 2016 (622) August 2016 (1056) Julayi 2016 (532) Juni 2016 (414) Kwangathi i-2016 (505) April 2016 (713) March 2016 (743) I-February 2016 (382) UJanuwari 2016 (123) I-December 2015 (357) November 2015 (327) Okthoba 2015 (152) September 2015 (259) August 2015 (440) Julayi 2015 (276) Juni 2015 (140) Kwangathi i-2015 (128) April 2015 (435) March 2015 (289) I-February 2015 (298) UJanuwari 2015 (131) I-December 2014 (103) November 2014 (194) Okthoba 2014 (148) September 2014 (381) August 2014 (250) Julayi 2014 (287) Juni 2014 (363) Kwangathi i-2014 (231) April 2014 (744) March 2014 (560) I-February 2014 (427) UJanuwari 2014 (289) I-December 2013 (137) November 2013 (545) Okthoba 2013 (290) Julayi 2013 (26) Kwangathi i-2013 (13) April 2013 (1) March 2013 (2) 0 (306)